Marie Lydia Rafaranirina, sady anatin’ny fanahiana no mahazo fahasoavana | UNICEF Madagasikara
Marie Lydia Rafaranirina, sady anatin’ny fanahiana no mahazo fahasoavana
Nangonin'i Marie Léonide ary nosoratan'i Fanja Saholiarisoa
Tantara tsy misy toa azy. Niteraka kamban-telo i Marie Lydia Rafaranirina dimy volana lasa izay tao amin'ny Hopitaly anjerimanontolon'i Mahajanga; vao 25 taona monja izy. Zanany voalohany ireo ary ireto avy ny anaran’ireo zazakely: Fitiavana Nancy Nomenjanahary, Finoana Nancia Nomenjanahary ary Nelson Fitahianaivo. Tsy mbola manambady izy ary ny olon-tiany dia afaka nitondra azy niverina tany Ambositra ihany tamin'ny 21 martsa 2020, kanefa mbola tsy misy mazava aloha ny momba ny fikarakarana izany ankohonany kely izany.
Ho an'i Marie Lydia Rafaranirina, ny fahazoana izany kamban-telo izany dia sady fahasoavana no loharanon’ahiahy. Ny fanabeazana ireo kambana ireo miaraka amin’ny toe-bola tsy dia ampy loatra dia toe-javatra sarotra tokoa ho an'ity renim-pianakaviana ity, izay soa ihany fa nahazo ny fanohanan'ny fianakaviany.
Narary vao tsy ela akory i Marie Lydia ary mbola ao anaty fangalan’aina tanteraka izy no nihaona taminy izahay. Mikohaka ireo zanany ary ny rainy, Marcel Rakotonindrina, izay raiben'ireo kambana, dia nanazava taminy fotsiny fa ny tsinam-bolana no antony mahatonga izany. Ny zandriny vavy, Marie Eugenie Rasoarilety, izay vao 19 taona monja, no manampy azy mitaiza ireo kambana ireo. Io rahavaviny io no manasa ny tantin-jaza, manamboatra ny ronono ary manome sakafo ireo zazakely. Tsy mampinono i Marie Lydia satria marary izy sady tsy miakatra ny nonony ka vao miha-manasarotra ny toe-javatra izany. Ronon’omby avy amin’ny ombin’i Dadabe Marcel tapohin-drano mafana miaraka amin’ny vary no omena ireo zazakely ireo.
Na dia miaina ao anatin'izany fahasahiranana izany aza i Marie Lydia dia be herim-po hatrany izy ary manantena ho avy tsaratsara kokoa. "Tena faly aho raha misy lasa masera ny iray amin'ireo zanako vavy ireo satria izaho mihitsy no nanana an’izany faniriana izany. Mba hamelomana ireto zanako ireto dia tsy maintsy miezaka mafy aho ao anatin’ny asako amin’ny maha-tantsaha sy mpiompy ahy toa ny ray aman-dreniko. Mandritra izany fotoana izany dia mieritreritra ny hanokatra fivarotana enta-madinika ihany koa aho mba hahafahako mahazo vola kely isan'andro," hoy i Marie Lydia, velom-panantenana.
Fiantohana ny fivoaran'ny zaza